"NJEHIE NZUZO" - NSOGBU KỌMPUTA ENWEGHỊ ATỤ - ISIOKWU - 2019
Agụrụ m ya na wired ma kpebie ịsụgharị. N'ezie, isiokwu ahụ bụ eziokwu nke Komsomol, ma ọ nwere ike ịmasị.
N'ihe dị ka otu afọ gara aga, Stephen Jakisa nwere nsogbu dị njọ na kọmputa ya. Ha malitere mgbe ọ na-arụ ọrụ Agha 3 - onye na-agba égbè mbụ, bụ nke ihe a na-eme na nso nso. N'oge na-adịghị anya, nsogbu ahụ abụghị nanị na egwuregwu ahụ, ma ihe nchọgharị ya gbakwara ọ bụla n'ime minit 30 ọ bụla. N'ihi ya, ọ pụghị ọbụna ịwụnye ihe omume ọ bụla na PC ya.
Ọ bụ na Stivin bụ onye mmemme site na ọrụ, na onye maara nkà na ụzụ, kpebiri na ya "nje" ma ọ bụ, ikekwe, arụnyere ụfọdụ ụdị ngwanrọ nke nwere nnukwu ahụhụ. Na nsogbu, o kpebiri ichigharịkwuru enyi ya bụ John Stefanovichi (Ioan Stevanovici), bụ onye na-ede akwụkwọ nyocha maka ịdabere na kọmputa.
Mgbe nyocha nke nkenke, Stivin na John chọpụtara nsogbu - ihe mgbaba na-adịghị mma na kọmputa Jakis. Ebe ọ bụ na kọmputa ahụ rụpụtara ọrụ nke ọma maka ihe dị ka ọnwa isii tupu nsogbu ahụ emee, Stivin echeghị na nsogbu ọ bụla nwere ike ịme ruo mgbe enyi ya mere ka o nwee ike ịnwale nyocha dị iche iche maka nchịkọta nchekwa. Nye Stivin, nke a abụghị ihe ọhụrụ. Dịka ya onwe ya kwuru, sị: "Ọ bụrụ na nke a mere mmadụ n'okporo ámá, onye na-amaghị ihe ọ bụla banyere kọmputa, ọ ga-abụ na ọ ga-anwụ na njedebe."
Mgbe Jakis wepụrụ usoro nsogbu nchekwa nsogbu, kọmputa ya na-arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe kọmputa kwaruru, a na-ekwenyekarị na enwere nsogbu na ngwanro ahụ. Otú ọ dị, n'ime afọ ole na ole gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa amalitela itinyekwu anya na nkwụsị ngwaike ma bịa ná nkwubi na nsogbu n'ihi na ha na-eme ọtụtụ ugboro karịa ọtụtụ ndị na-eche.
Ihuenyo mmiri nke ọnwụ na Windows 8
Ndị na-emepụta ikuku na-arụ ọrụ siri ike na-anwale ugbo ha tupu ha etinye ha n'ahịa, ma ha anaghị achọ ikwu banyere eziokwu ahụ bụ na ọ siri nnọọ ike ịhụ na microchips na-arụ ọrụ ruo ogologo oge. Kemgbe afọ iri asaa na asaa nke narị afọ gara aga, ndị na-agba mgbawa amawo na ọtụtụ nsogbu ngwaike nwere ike kpatara mgbanwe dị na steeti bits n'ime microprocessors. Dika ntụgharị transistors na-ebelata, àgwà nke ebubo ebubo na ha na-abawanye ma bụrụ nke a na-apụghị ịchọta. Ndị nrụpụta na-akpọ ụdị njehie ndị ahụ "njehie dị nro", ọ bụ ezie na ha anaghị emetụta ngwanrọ ahụ.
Otú ọ dị, njehie ndị a bụ naanị akụkụ nke nsogbu ahụ: n'ime afọ ise gara aga, ndị nchọpụta, na-amụ usoro kọmputa dị mgbagwoju anya na nnukwu kọmputa, kwubiri na n'ọtụtụ ọnọdụ, ngwa kọmputa anyị ji eme ihe bụ nanị agbaji. Mmetụta dị elu ma ọ bụ mmepụta nrụpụta nwere ike ime ka ihe ndị dị na kọmputa daa oge, na-ekwe ka ndị electrons na-agagharị n'etiti transistors ma ọ bụ ọwa nke mgbawa maka mgbatị data.
Ndị ọkà mmụta sayensị tinyere aka na mmepe nke kọmputa ndị ọzọ na-egosi nchegbu dị njọ maka njehie ndị dị otú ahụ na otu n'ime isi akụkụ nke nsogbu a bụ ike. Dika enweputa kọmputa nke ozo, ha na-enweta otutu ihe ndi ozo na ihe di obere. Na, n'ime obere transistors, a na-achọwanye ume dị ukwuu iji mee ka mkpụrụ ahụ dị n'ime ha.
Nsogbu a jikọtara ya na physics dị mkpa. Dị ka ndị na-emepụta microchip zigara electrons na obere na-erughị ọdụ, electrons na-esi na ha pụọ. Obere ihe ntanetị ahụ, ọtụtụ electrons nwere ike "na-asọpụ" ma chọkwuo ike maka ịrụ ọrụ nke kọmputa. Nsogbu a dị nnọọ mgbagwoju anya na Intel na-arụ ọrụ na Ngalaba Energy Energy na US na-edozi ya. N'ọdịnihu, Intel na-ezube iji nkà na ụzụ 5-nm rụọ ọrụ maka imepụta ibe nke ga-abụ ihe karịrị ugboro 1000 karịa arụmọrụ na ndị echere na njedebe nke afọ iri a. Otú ọ dị, o yiri ka ihe ndị dị otú ahụ ga-achọkwa oke ume.
"Anyị maara otú e si esi mee ka ndị dị otú ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ike ike," ka Mark Seager, bụ onye isi ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-arụ ọrụ na Intel, kwuru, "Ma ọ bụrụ na ị jụọ anyị ịza ajụjụ a kwa, karịrị ikike anyị. "
Maka ndị ọrụ kọmputa nkịtị, dị ka Stephen Jakis, ụwa nke njehie dị otú ahụ bụ ebe a na-amaghị. Ndị na-ekpuchi ikuku anaghị amasị ikwu banyere ugboro ole ngwaahịa ha na-adaba, na-ahọrọ idebe ozi nzuzo a.